इन्फोग्राफिक्सको कति खर्च हुन्छ? (र कसरी $ १००० बचत गर्ने) | Martech Zone
इन्फोग्राफिक्सको कति खर्च हुन्छ? (र कसरी $ १००० बचत गर्ने)
आइतवार, जनवरी २,, २०१। सोमबार, जनवरी 11, 2016 Douglas Karr
त्यहाँ एक हप्ता हुँदैन कि हामीसँग यसको उत्पादनको प्रत्येक चरणमा इन्फोग्राफिक छैन DK New Media। हाम्रो रणनीतिक टीम लगातार अनौंठो विषयहरूको लागि खोजिरहेको छ जुन हाम्रो ग्राहकहरूको सामग्री मार्केटि strate रणनीति भित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो अनुसन्धान टोली ईन्टरनेट को वरिपरि नयाँ माध्यमिक अनुसन्धान संग्रह गर्दछ। हाम्रो कथाकारले हामीले ल्याएको अवधारणाको वरिपरि कथा लेखिरहेको छ। र हाम्रो डिजाइनरहरू ती कथाहरूलाई नेत्रहीन रूपमा विकास गर्न काम गरिरहेका छन्।
व्यवसायहरू जुन # इन्फोग्राफिक्स प्रकाशित गर्छन् १२% अधिक यातायात भोल्युम हुन्छ
सामग्री मार्केटरहरूको एक विशाल बहुमत एक इन्फोग्राफिक केवल एक आधार को वरिपरि डाटा र तथ्या of्क को एक टन लपेटिरहेको छ लाग्छ। उह ... हामी यी सबै वेबमा देख्छौं र तिनीहरूलाई कहिले पनि साझेदारी गर्दैनौं जबसम्म त्यहाँ केही तथ्या .्कहरूको बारेमा अविश्वसनीय जबरजस्तीको कुरा भेट्टाइन्छ। हामी विश्वास गर्छौं कि सन्तुलित इन्फोग्राफिकले एक जटिल कथा बताउँछ, नेत्रहीन सहायता अनुसन्धान प्रदान गर्दछ, विभिन्न साइटहरू र उपकरणहरूमा अवलोकन गर्न अनुकूलित छ, र दर्शकलाई निर्णयमा लैजान बाध्यकारी कल-टु-एक्शनमा टु .्गिन्छ।
इन्फोग्राफिकको लागतमा कुन पक्षले असर गर्छ?
हामीले विकास गर्ने प्रत्येक इन्फोग्राफिकमा एक टन काम छ, तर हामी अझै अन्य कम्पनीहरूसँग तुलनात्मक हिसाबले राम्रो मूल्य निर्धारण गर्दछौं। इन्फोग्राफिक्स व्यापक मूल्य निर्धारणमा भिन्न हुन सक्दछ - डिजाइनको लागि केहि सय डलरदेखि, पूर्ण उत्पादन, पदोन्नति र पिचिंगको लागि दशौं हजारौं डलरसम्म। यहाँ एजेन्सीको आफ्नो अर्को इन्फोग्राफिक विकास गर्दा प्रश्नहरूको प्रकारहरू छन्?
अनुसन्धान - तपाईंसँग पहिले नै इन्फोग्राफिकको लागि सबै अनुसन्धान र डाटा आवश्यक छ? यसको एउटा उदाहरण हो जब तपाई ebook वा ह्वाइटपेपर प्रकाशित गर्नुहुन्छ - सामान्यतया तपाईसँग सबै अनुसन्धान हुन्छ तपाईलाई डेटा पत्ता लगाउन संसाधन तैनाथ गर्नुको सट्टा हुन्छ। तपाईंको आफ्नै डाटाले केही समय बचत गर्न सक्दछ - तर प्रायः मूल्य परिवर्तन गर्न पर्याप्त हुँदैन।
ब्रान्डिङ - कहिलेकाँही हामी कडा परिश्रम गर्दछौं हाम्रो ईन्टरग्राफिक्सलाई बिल्कुलै हाम्रो ग्राहकहरू जस्तो, अर्को पटक हामी उनीहरूलाई बिल्कुलै फरक ब्रान्ड गर्न कार्य गर्दछौं। यदि पाठकहरूले तपाइँको ब्रान्ड जताततै देख्दछन्, तपाइँ नयाँ सम्भावनाहरूमा पुग्न सक्नुहुन्न र तपाइँको इन्फोग्राफिकको धेरै साझेदारी गर्न सक्नुहुन्न। यो अत्यधिक बिक्री उन्मुख र कम जानकारीपूर्ण देखिन सक्छ। अवश्य पनि, यदि तपाईं नयाँ ब्राण्ड हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको पहिचान निर्माण गर्न उत्तम तरिका हुन सक्छ! कडा ब्रान्डि standards मापदण्डहरू कायम राख्दा डिजाइन सेवाहरूको लागत बढाउन सक्छ।
समय रेखा - हाम्रो इन्फोग्राफिक्स को सफलता को लागी उत्पादन को माध्यम बाट योजना बाट केहि हप्ता को काम को आवश्यकता छ। सबै ईमानदारी मा, हामी सामान्यतया कम को लागी प्रस्तावहरु प्रदान गर्दैनौं यदि सम्मिलित धेरै प्रयासहरू न्यूनतम हुनेछन। जब हामीले खालि अवधिमा इन्फोग्राफिक्सहरू विकास गर्‍यौं, हामीले परिणामहरू देख्न सकेनौं जब उनीहरूलाई योग्य हेरचाह र ध्यान प्रदान गरिएको छ। कुनै पनि परियोजनासँगै, कडा समयसीमाले लागत बढाउँदछ।
दर्शक - संग Martech Zoneहामी हाम्रा मार्केटिंग र बिक्री सम्बन्धित इन्फोग्राफिक्सलाई हाम्रा श्रोताहरूलाई प्रमोट गर्न ईर्ष्याजनक स्थितिमा छौं, जुन एक ठूलो आकार हो जुन उद्योगमा फराकिलो छ। जबकि अन्य एजेन्सीहरूले पिचिंग र पदोन्नतीको लागि शुल्क लिन्छन्, हामी प्रायः त्यस लागतलाई पूर्वानुमान गर्छौं र यसलाई हाम्रो समुदायमा जारी गर्दछौं र यसले अपेक्षाहरू भन्दा माथि कार्य गर्दछ।
सम्पत्ति - यति धेरै काम हाम्रो ग्राहकहरूको इन्फोग्राफिक्समा जान्छ कि हामी विश्वास गर्दैनौं कि हामीले सम्पन्न ग्राफिक फाईलहरू समात्नु पर्छ। हामी प्राय जसो दुवै प्रस्तुतीकरण वा पीडीएफ संस्करणको साथसाथै हाम्रा ग्राहकहरूको लागि वेब-अनुकूलित ठाडो संस्करण सिर्जना गर्दछौं। हामी अझै ती फाईलहरू तिनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दछौं, यद्यपि तिनीहरूको मार्केटिंग टोलीहरूले वितरण गरेको अन्य जमानतमा ग्राफिक्स र जानकारी समाहित गर्न र पुन: निर्माण गर्न सक्दछन्। त्यसले लगानीमा फिर्ताको सुधारलाई महत्वपूर्ण बनाउँछ।
सदस्यता - एक इन्फोग्राफिकले कम्पनीको लागि अविश्वसनीय प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि पहिलो इन्फोग्राफिकको उत्पादनमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ जुन भविष्यको इन्फोग्राफिक्सलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, यदि इन्फोग्राफिक्सको संग्रह पनि त्यस्तै डिजाइन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सडकमा लागत बचतहरू छन्। हामी कम्तिमा कम्तिमा inf इन्फोग्राफिक्सको लागि ग्राहकहरूलाई साइन अप गर्न सिफारिस गर्दछौं - प्रति क्वार्टरमा एक र त्यसपछि उनीहरू प्रकाशन पछि कसरी महीनाहरूमा प्रदर्शन गर्दछ।
पदोन्नति - इन्फोग्राफिक्स अविश्वसनीय हो, तर तिनीहरूलाई भुक्तान गरिएको विज्ञापन मार्फत हेर्नु अझै पनि उत्तम तरिका हो। हामी प्लेटफर्महरू मार्फत हाम्रा ग्राहकहरूको इन्फोग्राफिक्सको मामूली पदोन्नति प्रदान गर्दछौं StumbleUpon विज्ञापन। विशिष्ट सामग्री विपरीत, यसलाई जारी अभियानहरूको आवश्यक पर्दैन। प्रारम्भिक दृश्यता बढाउनको लागि एउटा अभियान अभियान यो पर्याप्त ईन्टरनेटमा प्रासंगिक साइटहरूमा साझा र प्रकाशित गर्न पर्याप्त हुन सक्छ।
पिचिंग - यदि तपाईंसँग सार्वजनिक सम्बन्ध टोली आन्तरिक वा एक सार्वजनिक सम्बन्ध एजेन्सी तपाईंसँग काम गरिरहेको छ भने, इन्फोग्राफिक्स तिनीहरूको आफ्नै प्रकाशनहरूको साथ प्रभावशालीहरूलाई पिच गर्न अविश्वसनीय हुन्छ। यी प्रकारका सेवाहरूले एक इन्फोग्राफिकको लागतलाई दोग्न गर्न सक्दछ, यद्यपि, तपाईंले मूल्या to्कन गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंलाई अधिकतम अवलोकन गर्नु आवश्यक छ (समयबद्ध सामग्रीमा जस्तै) वा गति-आधारित रणनीतिको लागि जानुहोस् जहाँ यो फेला पर्‍यो जैविक
त्यसो भए कति एक इन्फोग्राफिक लागत पर्छ?
एकल इन्फोग्राफिकको लागि, हामी project 5,000 (US) को प्रोजेक्ट रेट चार्ज गर्छौं जुन पदोन्नति (पिचिंग होइन) समावेश गर्दछ र हाम्रा ग्राहकहरूलाई सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्छ। एक त्रैमासिक इन्फोग्राफिकले इन्फोग्राफिक्सको लागत प्रत्येक $ ,4,000०० सम्ममा खसाल्छ। एक मासिक इन्फोग्राफिक लागत drops 3,000 को लागी प्रभावकारी हुन्छ किनकि हामी प्रक्रियामा निर्माण गर्न सक्षम छौं दक्षताको कारण। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंको केही प्रश्न वा टिप्पणीहरू छन् - वा यदि तपाईं सुरू गर्न चाहनुहुन्छ भने!
[बक्स प्रकार = "सफलता" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "90%"] यो लेख उल्लेख जब तपाईं हाम्रो एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंको पहिलो इन्फोग्राफिक $ १,००० बाट छुट पाउनेछौं। वा "इन्फोग्राफिक्स २०१1,000" प्रयोग गर्नुहोस् अनलाइन अर्डर गर्दै। [/ बक्स]
हामीसँग एजेन्सी मूल्य निर्धारण पनि छ जहाँ हामी अन्य एजेन्सीहरूका लागि इन्फोग्राफिकहरू विकास गर्छौं - दुबै सार्वजनिक सम्बन्ध र डिजाइन। विवरणका लागि मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
एक इन्फोग्राफिक को ROI के हो?
इन्फोग्राफिक्स वास्तव मा सामग्री को एक जादुई टुक्रा हो। इन्फोग्राफिक्सले दुबै डाटा प्रदान गर्न सक्छ वा जटिल प्रक्रियाको व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ।
रूपान्तरण - इन्फोग्राफिक्स बढि अनुभूति र अधिकार मार्फत रूपान्तरण ड्राइभ गर्न सक्दछ।
बिक्री - हाम्रा धेरै ग्राहकहरू इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड बिक्री टोलीहरू इन्फोग्राफिक्सको प्रयोग पोषण दिन्छन् र सम्भावितहरूसँग संलग्न हुन्छन्। तिनीहरूले ठूलो बिक्री जमानत बनाउन।
बाढ्नु - इन्फोग्राफिक्स भाइरल फैलन र ब्रान्ड मान्यता र अनलाइन अधिकार निर्माण गर्न सक्दछ।
सामाजिक - इन्फोग्राफिक्स अविश्वसनीय सामाजिक सामग्री हो जुन सजिलैसँग प्रत्येक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा साझेदारी योग्य हुन्छ (तिनीहरूलाई एनिमेटेड र त्यसमा भिडियो उत्पादन सहित)।
कार्बनिक खोजी - इन्फोग्राफिक्स जुन प्रासंगिक साइटहरूमा प्रकाशित छ अत्यधिक आधिकारिक लि drive्क ड्राइभ गर्दछ र ग्राहकलाई नियमित रूपमा तैनाती गर्नेलाई।
सदाबहार - इन्फोग्राफिक्स प्राय: प्रदान गर्दछ जुन एक महिना भन्दा बढी र कहिलेकाँही वर्ष बर्ष प्रति वर्ष फिर्ता गर्न सकिन्छ।
इन्फोग्राफिकमा लगानीको फिर्ताको परिमाण दिन वा हप्ताहरूमा मापन हुँदैन, यो प्राय: महिना र बर्षहरूमा नापिन्छ। हामीसँग ग्राहकहरू छन् जुन धेरै वर्ष पछि हामीलाई भन्दछ कि ती अझै शीर्ष पृष्ठहरू छन् उनीहरूको वेबसाइटमा।
हाम्रो पोर्टफोलियो जाँच गर्नुहोस् अब एक इन्फोग्राफिक आदेश!
टैग: कतिइन्फोग्राफिक्सको कति खर्च हुन्छइन्फोग्राफिक तत्वहरूइन्फोग्राफिक कारकइन्फोग्राफिक रणनीतिजानकारीात्मक ग्राफिकमार्केटिंग इन्फोग्राफिक्सsales collateral
व्यापार मार्केटिंग रणनीतिहरूमा लगानी कतिको छ?